खोपमा अनियमितता... युवालाई काखा, जेष्ठलाई पाखा - Pradesh Today
Homebreaking-newsखोपमा अनियमितता... ...
खोपमा अनियमितता… युवालाई काखा, जेष्ठलाई पाखा
दाङ, २८ जेठ । तुलसीपुर–५का ६२ वर्षीय विष्णुकमार श्रेष्ठले कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन बिहानै ७ बजे तुलसीपुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पुगे । खोप कार्ड पनि बनाए । करिव चार घण्टा लाईनमा बसेपछि उनलाई खोप लगाउनका लागि खोप कक्षमा पठाईयो । तर उनले खोप लगाउन पाएनन् । उनले खोप लगाउने जिम्मा पाएका एकजनाले खोपलगाउन पाउनु हुँदैन भनेर पठाइ दिए ।
६२ वर्ष उमेर पुग्न केहीदिन बाँकी रहेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले खोप नलगाईदिएपछि खोप नलगाएर उनी घर फर्किएको बताए । ‘चार घण्टासम्म लाईनमा बस्न लगाएर उमेर पुगेन भनेर घर फर्काए’ उनले भने– ‘लगाउन नै नमिल्ने भए कार्ड किन बनाईदिएको हो ?’ अनि लाइनमा किन बसालेको पहिले नै भनेको भए त्यो कष्ट सहने थिइन् ।
उमेरले ६३ वर्ष पुगेका तुलसीपुर–१ निवासी जिवलाल न्यौपाने कोरोनाविरूद्धको खोप लगाउनका लागि बुधबार बिहानै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा पुगे । दीर्घरोगी त्यसैमाथि मुटुको शल्यक्रिया गरेका उनलाई वडाले तुलसीपुरमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा खोप लगाउन सिफारिस गरेपछि उनी सिफारिसका आधारमा उक्त अस्पताल आएका थिए । न्यौपाने बिहान ११ बजे देखि खोपको पालो कुर्दै रूखको छहारीमा बसिरहे । तर बेलुका ५ बजेसम्म पनि खोप लगाउने पालो आएन ।
यस्तै तुलसीपुर–६ का ६३ वर्षीय दुर्गाप्रसाद न्यौपाने पनि कोरोनाविरूद्धको खोप लगाउन बिहान १० बजे नै अस्पतालमा पुगे । सरकारले ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका बृद्धबृद्धाहरूलाई कोरोना–विरूद्धको खोप लगाउने भनेको सूचनाका आधारमा नागरिकता लिएर अस्पताल पुगेका थिए । तर सात घण्टा बितिसक्दा पनि उनको पालो भने आएन ।
दुर्गाप्रसाद र जीवलाल जस्तै ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू दिनभर पालो कुरेर लाईनमा बसिरहे । कतिले खोप लगाए कति त्यत्तिकै फर्किए । तर २५/३० वर्षका व्यक्ति खोप लगाउँदै जाँदै गरिरहे । तर उनीहरूको पालो आएन उल्टै स्वास्थ्यकर्मीलाई बुझाएको नागरिकता र नागरिकताको फोटोकपी समेत हरायो भनेर लुकाइयो ।
‘खोप लगाउने भनेर नाम दर्ता गर्दा नागरिकता र फोटोकपी दिएको थिए, त्यो अहिले भेटिदैन’ दुर्गाप्रसादले भने– ‘हामीलाई दिनभर लाईनमा बसाउने, तर २५/३० वर्षकालाई भने खोप लगाउँदै पठाउँदै गर्ने ? यो कस्तो नीति हो ?’ उनले भने, ‘पहुँच हुनेले जे गरे पनि हुने हो ?
जिल्लामा पहुँचवाला व्यवसायी र व्यक्तिहरूले विभिन्न क्षेत्रका खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाएका छन् । सरकारले ६२–६४ तोकेको छ तर दाङमा त्योभन्दा कम उमेरका व्यक्ति र युवाले धमाधम खोप लगाएका छन् ।
अस्पतालका कर्मचारीहरूको कमजोरीका कारण बृद्धबृद्धाका लागि उपलव्ध खोप अन्य उमेर समूहका व्यक्तिले लगाउने गरेको उनले बताए । आफूहरूलाई लाइनमा बसाएर अन्य उमेर समूहका व्यक्तिलाई खोप लगाउँदा भिडभाड बढ्नुको साथै संक्रमणको जोखिम र आफूले बुझाएका परिचयपत्रहरू समेत हराएको जीवलाल न्यौपानेले बताए ।
राजनीतिक पद, पावर र शक्तिका आधारमा सेवा प्रवाह गर्ने प्रवृत्तिका कारण यसरी खोपमा अनियमितता बढेको उनी बताउँछन् । जिल्लामा पहुँचवाला व्यवसायी र व्यक्तिहरूले विभिन्न क्षेत्रका खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाएका छन् ।
सरकारले ६२–६४ तोकेको छ तर दाङमा त्योभन्दा कम उमेरका व्यक्ति र युवाले धमाधम खोप लगाएका छन् । खोप लगाएकाहरू अधिकांशले आफै खोपको कार्ड सार्वजनिक गरिरहेका पनि छन् । स्वास्थ्य कर्मचारीको लापरबाहीले लक्षित वर्गभन्दा फरक व्यक्तिहरूलाई खोप लगाइएको गुनासो अहिले अत्यधिक भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय दाङका अनुसार जेठ २५ र २६ गते जिल्लाभरका करिव आठ हजार बृद्धबृद्धाहरूलाई कोरोनाविरूद्धको खोप लगाउने लक्ष्य थियो । तर जिल्लाभर ७ हजार ६ सय ५१ जनाले मात्र कोरोनाको खोप लगाएका छन् । त्यो पनि तोकेको भन्दा फरक उमेर समूहको समेत गरेर हो ।
यसमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तोकेको भन्दा फरक उमेर समूहका व्यक्तिले खोप लगाएको अनुमान गरिएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खोपमा अनियमितता भएको भनिए पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूबाट कुनैपनि अनियमितता नभएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले बताए ।
हरेक खोप केन्द्रमा राजनैतिक दबाव, संस्थागत दबाव, नागरिक समाज, विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूको दबाव धेरै आउने भएकाले लक्ष्य अनुसार खोप लगाउन नसकिएको उनले बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूले त्यो मेरो, त्यो मेरो भनेर खोप लगाईदिने गरेका छैनन्’ उनले भने– ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि, संघसंस्थाका अगुवाहरूबाट यतिधेरै दबाव आउँछ, कि कसले के गर्ने भन्ने हुन्छ ? हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’
उमेर पुगेका कुनैपनि जेष्ठ नागरिकहरूलाई कोरोनाविरूद्धको खोपबाट बञ्चित नगरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन विमल केसीले बताए । अन्य जिल्लामा पहिलो डोजको खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले दोस्रो डोजको खोप लगाउन आएकाले आम नागरिकमा गलत बुझाई परेको उनको जिकिर छ । तर यहाँ पहिलो डोज नै युवाहरूलाई खोप लगाइएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगर–पालिकामा मात्रै दुई हजार दुईसय खोप बृद्धबृद्धाहरूका लागि जनस्वास्थ्यले उपलब्ध गराएको थियो । जसमध्ये दुई हजार एकसय २९ जनाले कोरोनाविरूद्धको खोप लगाएका छन् ।
दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले खोपमा अनियमितता भए/नभएको भन्नेबारे अनुगमन कार्य भइरहेको बताए । जिल्लामा रहेको कोरोना खोप समन्वय समितिले सबै अस्पतालहरूको अनुगमन गरी अनियमितता भएको पाईएमा कसैको आड भरोसामा लक्षित वर्गभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई खोप नलगाउन खोप केन्द्रहरूलाई सुसूचित गराउने उनले बताए ।